MOETHIHAAUNG: ရခိုင် သတင်း
မင်းဂံရှိ နေအိမ်များအား ဘင်္ဂလီများက ဆက်လျက်မီးရှို့လျက်ရှ်ိ
by Myit Makha Mediagroup on 10 Jun, 2012
ယနေ့နံနက်တွင်လည်း ဘင်္ဂလီများက စစ်တွေမြို့။မင်းဂံ ရပ်ကွက် ၇၊ ဂ နှင့် ၁၀ ရပ်ကွက်များအတွင်းရှိ
သော နေအိမ်များကို မီးရှို့လျက်ရှိကြောင်း ယနေ့နံနက်တွင်ပင် အိမ်ခြေ ၇ လုံးခန့်
ယနေ့နံနက် ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ် သတင်းပေးပို့ချက်ဖြစ်ပါသည်။
စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂလီ နှစ်ဘက် တင်းမာ
by Myit Makha Mediagroup on
စစ်တွေမြို့ မင်းဂံရပ်ကွက် (အကွက် -၁၂) ၁၃ ) တွင် ဘင်္ဂလီကုလားများ က
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား နေအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေ ဟုသတင်းရရှိသည်။
မီးရှို့နေကြသည်။ နှစ်ဘက်လုံးတင်းမာနေသည်။ စုစုပေါင်းအိမ်ခြေတစ်ရာ ကျော် ပျက်စီးသွားပြီး
ဘင်္ဂလီတို့က ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတဦးကို ဖမ်းဆီးသတ်ပစ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
by Myit Makha Mediagroup on9Jun, 2012
ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ် ရေတာရှည်လမ်းတွင်းရှိ ဓညဝတီစာသင်တိုက်အတွင်းတွင် ရခိုင်လူမျိုးများက စုဝေးခဲ့ကာ အများစုမှာနဖူးစည်းအဖြူရောင်များနှင့် စာတမ်းများကို ကိုင်ဆောင်ထားကြသည်။
အဆိုပါ ရခိုင်လူမျိုးအယောက် (၃၀၀) ကျော်မှာ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်သို့ တက်ရောက်ဆန္ဒခဲ့ကြပြီး ရခိုင်လူမျိုး အကြီးအကဲများ ဘုန်းကြီးများက ကျောင်းတိုက်တံခါးကို ပိတ်၍တားဆီးခဲ့သော်လည်း တားဆီမရခဲ့ပေ။
ရွှေတိဂုံဘုရားတွင် ရခိုင်လူမျိုးဦးရေ ၃၀၀ ၀န်းကျင်ခန့် လေးဦးတစ်တွဲနှုန်းဖြင့် 'ရခိုင်ပြည်ကို ကာကွယ်ပါ' ။ 'တစ်မျိုးသားလုံးကို ကာကွယ်ပါ' စာတမ်းများ ကိုင်ဆောင်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်ပေါ်တွင် လက်ယာရစ် ဆုတောင်း လှည့်လည့််ခဲ့သည်။ ဆုတောင်းလှည့်လည်သူများထဲက တစ်ဦးက ယခုကဲ့ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်ရခိုင်တွေအပေါ် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပြောတဲ့ လူများစုက လူနည်းစုကို ညင်းပန်းတယ် ဆိုတာ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့က လူနည်းစုပါ။”ရခိုင်အမျိူးသာတစ်ဦးကပြောသည်။
ရခိုင်လူမျိုးများက “ဘင်္ဂလီလူမျိူး လေးသိန်း၏ အကြမ်းဖက်မှုများကို တားဆီးပေးပါ။ မုဒိန်းကျင့်သူနှင့် အကြမ်းဖက်သူများအား လူထုရှေ့၌ အပြစ်ပေးပါလှုံဆော်သူ ကျူးလွန်သူ ဘင်္ဂလီလူမျိူး များအား အပြစ်ပေးပါ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာ သောဘင်္ဂလီများအား အမြန်ထုတ်ဖော်၍ ဖမ်းဆီးပေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားများအသိ သတိဖြင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါ ။လက်ရှိအခြေအနေကို ချက်ချင်းထိန်းသိမ်း ပေးပါ။ တရားမ၀င် နေထိုင် သော ဘင်္ဂလီ များအား ရခိုင်ပြည်မှ နှင်ထုတ်ပေးရန်။” စသည်တို့ တောင်းဆိုမှု များအား အစိုးရထံသို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတို့က တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အဆိပါထုတ်ပြန်ချက်(၉)ရပ် ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ရွှေတိဂုံစေတီသို့ တန်းစီတက်ရောက်ပြီး ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရခိုင်တွင် သေဆုံးသွားသူ မသီတာထွေးနှင့် မောင်တောမြို့မှ ရခိုင်အမျိုးသားများအတွက် ရွှေတိဂုံစေတီ ဗုဒ္ဓဟူး နံထောင့်တွင် ဆုတောင်းကြသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်း စစ်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒါကြောင် အစိုးရအနေနဲ့ဘင်္ဂလီတွေကို တိုင်းပြည်က ရခိုင်ပြည်က အမြန်ဆုံးနှင်ထုတ် ပေးစေချင်ပါတယ်။”ပာု ရခိုင်အမျိုးသား ကိုထွန်းကျော်ကပြောသည်။
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တွင် ၃နာရီ ၃၅ မှ ၄နာရီ ၄၀ ၀န်းကျင်ထိ ဘုရားပေါ်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေး လှည့်လည်ကာ မေတ္တာပို့ခဲ့၍ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ပြန်လည်ဆင်းသွားကြသည်။
Posted by Myo Lwin Aung at 10:40 PM
မဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့လာတဲ့ဧည့်သည်များက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသား
လက်သည်းဆိတ် လက်ထိတ်နာရပါမယ်။ကိုယ့်နှမလေးသာ မွတ်ဆလင်ကုလားက မုဒိန်းကျင့်သွားရင်
ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး ရြွှေပည်အေး တရားဟောနေတဲ့သူတွေ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ။
ဒီပြသနာတွေ လျော့ပါးသွားအောင်၊ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ မွတ်ဆလင် တွေ ဗုံးခွဲတာမျိုးတွေ အထိ၊
ဖြစ်မလာခင် တားဆီးရတော့မှာပါ။(သင်္ကြန်မှာ ဗုံးခွဲတာ ကုလားလို့ကြားမိပါတယ်။)
ရခိုင် ပြည်နယ်ကနေ ဘင်္ဂါလီပြည်နယ်ဖြစ်သွားပါတော့မယ်။ပြီးရင်တစ်နိုင်ငံလုံးကို
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို အကာအကွယ်ပေးမဲ့ ဥပဒေ တင်သွင်းသင့်ပါပြီ။
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရင် ကုလားတွေ အခွင့်အရေး ယူလာနိုင် တွေ ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါပြီ။
နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးရင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေပါ ပါဝင်တဲ့
အဖွဲ့မျိုးနဲ့ထုတ်ပေးသင့်ပါတယ်။အမေစု ဆီလဲ သွားပြီ ငိုပြလိုက်ပါအုံး။ကုလားတွေကတော့ အရင်ငိုပြ
ဦးကိုကိုကြီးတစ်ယောက်ပဲ ၈၈မျိုးဆက်မှာ တိုင်းရင်းသားပဲထင်တယ်။ကျန်တာတွေ
အကုန်လုံးကုလားတွေပဲထင်တယ်။ဖယောင်းတိုင် ခောစငေါည တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် လုပ်ပါအုံး။
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေ စီတန်းလှည့်လည်တော့ ၈၈မျိုးဆက်တစ်ယောက်မှ မတွေ့ပါလား။
၈၈မျိုးဆက် ကုလားမြအေး ကတော့ ခင်ဗျားတို့ထက် ပိုသာတယ်။
▼ 2012 (6657)
Happy Canada Day‏
မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်နေ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ဓါးချက်မ...
နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အာဏာနဲ့ အာဏာရူး အကြောင်း
DASSK Welcome Back - 30.06.2012
ဂျီးဒေါ် အင် ကုမ္မဏီ
Burma/ Myanmar အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဟံသာဝတီ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်သို့ အ...
အမေစုကိုကြို နေကြ ပြီ
Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi in Pari...
အာဏာရှင် စစ်အုပ်စုက ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ယခုကတည်းက စတင...
အခြေခံဥပဒေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ခြင်း ဇာနည်ဝင်း|
"နှင်းဆီနီ ဥဒါန်း "
ဒုက္ခသည် ရခိုင်ပြည်သူများအား ကူညီကယ်ဆယ်ရေး
ကဗျာဆရာကြီးတင်မိုး ရဲ့ ချစ်စရာ့ သူ့ ကဗျာများ
-ဦးသိန်းစိန် က ဒီလိုတော့ ပြောတာဘဲ-
တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ခွင့်ရရင် ဦးဆောင်သွားမယ် လိ...
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဇကာတင်ရွေးချယ်ခံရသူများအား ဂုဏ်ပြုပ...
အမေရိကန်ကျန်းမာရေးအာမခံချက်ဥပဒေကို ဗဟိုတရားရုံးက အ...
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာဟာ …ဘယ်လောက်ကြီးမားနိုင်ပါသလဲ
Canada CBC NEWS about Suu
ရခိုင်ပြည်နယ်လက်ရှိအခြေအနေ Thursday, 28 June 201
လူမျိုးရေး ပြဿနာ နှင့် ကလေးကွက်
ရခိုင် ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် ရေဘေးသင့် ဒုက္ခသည်မ...
မပူပါ နဲ့ သေးမျှင်ရာ......
ဗုဒ္ဓဒေသနာအရ လူ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ...။
DASSK & Burmese at Paris
သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၃၆)
သမ္မတ အကြောင်း ကြားပါက ဒုတိယ သမ္မတ နေရာ ပြန်လည် ရွေး...
ကလေးစစ်သားပပျောက်ရေး အစိုးရနဲ့ကုလ ပူးပေါင်းဆောင်ရွ...
မြန်မာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် အမြန်ဆုံးပေးရန် ...
မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ မယ်တော်ဆေးခန်း လေ...
အစိုးရသတင်းမီဒီယာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နေပြည်တော်မှ...
NLD ဦးဥာဏ်ဝင်းအပေါ် ကော်မရှင်တရားစွဲဆိုမှု သက်သေ ၂၀...
(ကာ/လုံ) ကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာ သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့.
မြန်မာသံအမတ်နေရာအတွက် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်မှာ ကြာ...
တရုတ်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာတစ်ဦး ရဲ့ မြန်မာပြည်ပေါ် အမြ...
Practical Vipassana Meditation Exercise by Ven.Mah...
မြင့်မိုရ်တောင်နှင့် စကြာဝဠာ အကြောင်း
aung san suu kyi speak france language after recei...
ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးတဲ့နေ့ အခမ်းအနား ရန်ကုန်မ...
ပြင်သစ် သမ္မတ Francois Hollande နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စု...
မြန်မာဘက် ပို့မယ့် လက်နက်မျိုးစုံ ထိုင်းရဲ ဖမ်းမိ
မျက်မမြင် ဟီလာရီကလင်တန် နှင့် ဘင်္ဂလီ ဘိုးအေ RS...
မြစ်ကြီးနားမြို့သီတာရပ်ကွက်တွင် ရေကြီးရေလျှံ နေ
သမ္မတက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ဒုက္ခသည်ကိစ္စဆွေးနွေးမယ်
ဘန်ကောက်မြို့က အမွေးအမှင်ထူတဲ့ ကလေးမ
What should it be with regarding their citizenship...
ABSDF - မြောက်ပိုင်းသို့မိဘများရောက်ရှိနေစဉ် ထွက်ရ...
အမှိုက်ပုံးများ ခိုးခံရကြောင်း ရန်ကုန်စည်ပင်မှ သတင်...
အခြေခံ ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်နည်း
မောင်တောနယ်မှ လဝက နှင့် အင်တာဗျူး
ရခိုင်ပြည်နယ် သတင်း Saturday, 23 June 2012
ဗိုလ်ချုပ်ဒေါသထွက်သောနေ့ - အပိုင်း (၂)
ဘင်္ဂလား နယ်စပ် က ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက် စခန်း တွေ မှာ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ကို တ၀က်စီ ခွဲယူဖို့ တရား...
ရခိုင် ဆူပူမူကြောင့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင် ကုန်တင...